Dowladda Ugaandha oo dhexdhexaadinaysa Itoobiya & tigreega – Radio Daljir
Dowladda Ugaandha oo dhexdhexaadinaysa Itoobiya & tigreega
Nofeembar 16, 2020 10:05 b 0
Dowladda Uganda ayaa martigelin doonta wada hadalo u dhaxeeya Maamulka Tigreega iyo dowladda dhexe ee Itoobiya, sida uu xaqiijiyay Mas’uul sare oo ka tirsan dowladda Uganda.
Wakaalada Wararfa ee AFP ayaa sheegtay in ergo ka socota dowladda Itoobiya iyo Mucaaradka Tigreega ay tagi doonaan magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo xiriir dhow la leh Itoobiya ayaa garwadeen ka noqonaya wada hadaladan, isagoo la aaminsan yahay inuu yahay ninka ay warka ka maqlaan Jabhadda TPLF.
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Itoobiya ayaa tagi doona magaalada Kampala, si uu dowladda ugu matalo wada hadalada ka bilaabanaya Addis Ababa.
Wada hadalada ka bilaabanaya Uganda ayaa ujeedkooda yahay in lagu soo afjaro dagaalada ka socda waqooyiga dalka Itoobiya.
Maamulka gobalka Banaadir oo digniin culus soo saaray